SomaliTalk.com » Habka Ugu Sahlan ee Is-Hormarinta Qofeed.. Q.2aad | Cabdikamaal
Habka Ugu Sahlan ee Is-Hormarinta Qofeed.. Q.2aad | Cabdikamaal
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Friday, July 16, 2010 // 11 Jawaabood
HABKA UGU SAHLAN EE IS-HORMARINTA QOFEED (Qeybta 2aad)
Allaah ayaa mahad oo idil iska leh,nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo.
Qoraalkaan oo taxane noo ahaa kuna saabsanaa “Habka ugu sahlan ee is-hormarinta qofeed”. Ayaan ku bilaabeynaa qeybtiisii 2aad Qoraal/risaalo Nololeedka Qofeed, kadibna waxan kusoo afmeeraynaa Hanaanka loo dajiyo hadafka toosan.
Qoraal Nololeedka Qofeed
Qofkasta oo damacsan in uu is-hormariyo waxaa laga doonayaa inuu leeyahay qoraal cadeynaya waxa uu jecelyahay inuu gaaro mustaqbalka, kaas oo hagaya noloshiisa. Qoraalkaas oo uu qofku ku qorayo warqad, kuna cadeynayo waxa uu damacsan yahay mustaqbalka. Isla markaana uu dajisto hadafyada uu ku gaarayo waxa uu damacasanyahay. Hadaba, waxaan inta hore ee qeybta 2aad kaga hadli doonaa : Waa maxay Qoraal Nololeedka Qofeed? Muhiimadda ay u leedahay qofka? Sifadda laga rabo qoraalka, iyo sida loo qorto Qoraal nololeedka.
Waxaa la yiraahdaa Qoraal Nololeedka Qofeed: waa qoraal, qofku uu ku cadeynayo waxa uu tiiradda saarayo, rabana inuu mustaqbalka gaaro – haduu alle idmo-. Sidoo kale waxaa lagu qeexaa waa erayo kulminaya waxa qofka uu damacsanyahay ama uu hiigsanayo mustaqbalka.
Sababaha keenay in uu qofka uu qorto warqad cadeynaysa hadafkiisa ayaa ah; in qoraalku uu qofka siiyo dareen ah meesha uu usocdo, waxay kaloo ku kaalmeysaa in uu qofka kala ogaado waxa muhiimka u ah iyo waxa aan muhiimka aheyn. Sidoo kale waxay u fududeysaa go’aanada uu qaadanayo. Noloshana waxay siinaysaa qiimo, iyo dareen ah inuu wax hiigsanayo. Sidoo kale waxay siineysaa tab/qaab uu ooga faa’iideysto awoodiisa si sax ah. Tusaale ahaan, marka aad taqaanid waxa waajibka kugu ah in aad sameysid, waxaa kuu sahlan in aad abaartid oo qura meeshaas, sida jiheeyahaba uu u abaaro dhanka waqooyi kaliya.
Inta aanan bilaabin sida loo qoro risaalo nololeed, waxaa haboon in aan ogaano sifooyinka ee leedahay. Hadaba, qoraal nololeedku wuxuu hagayaa qofka si uu markasta u xasuusto hadafka uu leeyahay, isla markaana si guud waxa uu ka jawaabayaa sadex su’aalood oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah: Waa maxay hadafka aan ka leeyahay nolosha? Maxayse tahay Qiyamta aan Dhowrayo? Waa maxayse howsha/ficilka lagu gaarayo hadafka, laguna dhowrayo qiyamta ama waxa lama taabtaanka ii ah?
Habka loo qorto Qoraal Nololeedka
Qof kasta si buu u nidaamsadaa/qortaa qoraal nololeedkiisa. In kastoo ay jiraan Habab badan oo loo qoro, waxaanse halkaan ku sheegayaa hab ka mida sida loo qorto, waana sida tan:
Tilaabta kowaad: Soo qabso qalin iyo warqad, kana jawaab su’aalaha soosocda, maxaa yeelay waxay kugu saacidi doonaan kala xulashada iyo kala hormarinta sida ay u kala muhiimsanyihiin waxa aad damacsantahay:
– Waa maxay awooda iyo xirfadda aad leedahay?
– Waa maxay waxa aad jeceshahay in aad qabato?
– waa waxay waxa kuugu yaabka badnaa ee noloshaada soo maray ? Sababna?
– Hadii aad heysto lacag iyo waqti tallow maxaad ku qaban laheed?
– Marka aad fiiriso shaqadaada/howshaada, maxay tahay waxa aad jeceshahay in aad mar walba qabato?
– Sidoo kale, Marka aad is-fiiriso shaqsiy ahaantaada, waa maxay waxa aad u heelantahay in aad mar walba qabato?
– Waa maxay waxayaabaha noloshaada wax ka badali kara? Maxayse tahay Hadafka midkasta ee aad ka leedahay waxyaabahaas?
– Waa maxay waxa aadan jeclaysan ee ay noloshaadu la kulmeto hadda iyo mar walba?
– Ugu danbeyntii waa maxay waxa aad ka rabto/damacsanatahay noloshaada? Maxayse tahay wadada aad noloshaada ku socodsiinayso?
Qor waxyaabaha lama taabtaanka ah (Qiyamta) ee aad jeceshahay in aad dhowrtid, kana qor shanta ugu muhiimsan ee asaasiga u ah noloshaada, tusaale ahaan Cilmi, Diin jaceyl, Daljaceyl, Iscafis, Ixtiraam, Nabad, Howl karnimo, Raali ahaansho, Qanacsanaan, isku Naxariisasho, Dulqaad, Aamin-nimo, Malo wanaag, dhowrsanaan, Xornimo, hodantinimo, Guulaysi iyo kuwa kale oo badan.
Kadib marka aad qortid kuwa lama taabtaanka ah ee noloshaada, waxaa u gudbi in aad qortid Qoraal nololeedkii oo dhameystiran, ogowna naftaada baad u qoreysaa, uqorna si aad fahmi kartid iyo luqad aad fahmi kartid. Xasuunowna su’aasha ah: Qoraalkaani ma kugu dhiiragalinayaa in aad himadaada sare usii qaadid? Adigoo raacaya tusaalahaan, buux buuxi meelaha banaan:
Waxaan awoodaa …………………………. (sheeg shan ka mida Waxyaabaha lama taabtaanka ka ah agtaada) …………………………..sababtuna …………………………. (sheegna sababta ay muhiimka u yihiin) . waa inaan gaaraa …………..Waxana ku qaari –alle haduu idmo- in aan qabto …………………………..(qor howsha aad rabtid in aad qabtid si aad u xaqiijisid waxyaabahaas lama taabtaanka agtaada ka ah iyo waxa aad rabtid in aad gaartid). Waxaana ku gaari muddo dhan …………………………………………
Waxaan weydiiyey arday ka midda ka qeybqaata yaasha siminaar aan qaabtay, inuu qoro hadafkiisa nolosha waxaa uu u qoray sidatan:
Waxaan jeclahay in aan noqodo Macalin jecel ardaydiisa ayaguna ay jecelyihiin, kuna dhaqma diintiisa, ka runsheega waxa uu bartay, kaalmeeya naftiisa iyo dadka kaleba, isla markaana si aan ugu abuuro quluubta ardayda diinjaceyl , dal-jaceyl, walaaltinimo, isjaceyl, iskunaxariisasho, iscafis, isku dulqaadasho, wax-wada qabsi. Si aan u gaaro hadafkaas waa in aan Qaato Shahaadada Bachelor-ka, qeybta barashada islaamka, kuna barto afka carabiga, kuna qaato muddo afar sano ah gudaheed, kana qaato Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed.
Qoraal nololeedka wiilkaan marka aan falanqeyno waxaa ka muuqada qodobadii aan soo baranay.
Isku soo wada duuboo waxaa lama huraan ah in qoraalka uu yahay mid waafaqsan shareecadda islaamka, masuuliyadaada ka muslim ahaan, caafimadkaaga, shaqadaada, xariiridaada (qoys iyo mid bulshaba) iyo wixii lamidda, waxa loola jeedaa sidaa, in qoraal nololeedkaada iyo qodabadaan soo sheeganay in uusan ka jirin wax iska hor imaanaya, ama qalad ku ah diintaada, si aad u xaqiijisid tayadda qoraalka nololeedkaada.
Hanaanka Qoridda Hadafka Toosan
Kadib, marka aan soo baranay sida loo qoro warqad nololeedka waxaan halkaan si kooban uga hadli doonaa Hiigsi/hadafka iyo sida loo dajiyo iyo sifooyinka uu leeyahay. Sidaa darted, hadaf waxaa la yiraahdaa waa miraha waxa uu hiigsanayo qofka dhawaan iyo mudo fogba, lehna waqti xadidan, kana dhasha ficilka uu la yimaado. Taasi waxaa loola jeedaa qofku waa in uu leeyahay qoraal cad oo cadeynaya hadafka uu leeyahay kuwo dhow (Short term goals) iyo kuwo fogba (Long term goals). Hadafyada fogi waa kuwa lagu higsado gaaritankooda mudo ka badan sanad sida in uu qaato degree jaamacadeed iwm. Hadafyada dhawi waa kuwa lagu higsado gaaritaankooda mudo sanad ama ka yar ah,waxeeyna u adeegaan sidii lagu gaari lahaa hadafyada fog sida barasho loqadeed iwm.
Waxa kaloo loosii kala bixiyaa hadafyada ayadoo loo eegayo waxa laga rabo hadafka ilaa sadex nuuc. Kow, mid lagu saleeyey natiijadda la filayo waxaana la yiraah Natiijo Hiigsi (Outcome Goal). Labo, mid lagu saleeyey wax qabadka waxaana la yiraahdaa waxqabad Hiigsi (Performance Goal) wuxuuna u kala baxaa labo qeybood oo kala ah: waxqabad Jireed Hiigsi (Physical Performance Goal) iyo Waxqabad Maskaxeed hiigsi (Mental Performance Goal). Sadex, mid dheelitiran kuna salaysan hiigsasho dhanwalba ah inta noloshaada ay jirto, kulminayana dhamaan nuucyadda hadafyada kore, waxaana lagu magacaabaa Dheelitirnaasho Hiigsi (Balance Goal). Ken Blanchard ayaa yiri “ waxqabad kasta oo wacani wuxuu ka bilowday hadafyo cad” “All good performance starts with clear goals.” Biyo dhacaya Mid walba oo nuucayadaas ka tirsan wuxuu siinayaa qofka dajistay waxa lagu saleeyey hadafkaas.
Ku xeel dheerayaasha dajinta hadafyadda waxay badi isku raaceyn inuu hadafka noqdo ; mid go’an(specific), lacabiri karo (measurable), lagaari karo(attainable), macquul ah (realistic), waqtiyeeysan (timely). Bal hadii aan si kooban u sharaxno sifooyinkaas waa:
Hadafku waa inuu yahay mid xadidan (Specific); waxaa loola jeedaa waa inuu hadafgaaga ahaado mid go’an oo waliba qoran, muuqda oo wax kale ku qaldameyn, maxaa yeelay wuxuu kusiin kuuna cadeyn waxa aad rabtid oo go’an/xadidan, iskuna dhexyaacsaneen.
Sidoo kale hadafku waa inuu yahay mid lacabiri karo (Measurable) sabatuna waxay tahay waa inay jirtaa hanaan lagula socon karo isbedelka/horumarka iyo waxa ka suuragalay hadafkii iyo gaaritiisaba. Marka aad dareensantahay in aad wax un ka xaqijisay hadafka waxay kugu sii dhiiragalinaysaa in aad horay usii socotid.
Sidoo kale hadafku waa inuu yahay mid la gaari karo (Attainable) sabatuna waxay tahay hadafka aad dajisanaysid ha noqdo mid aad gaari kartid, mana ahan mid kasta oo fudud in si sahlan lagu gaaro. Hadaba hadafku waa inuu yahay mid aan aad u fududeyn aadna u dhib badneen , lana gaari karo sabatuna ay tahay hadafkaas asagaa hadii aad gaartid waxaad dareemeysaa in aad howl yara adag aad soo fulisay, naftuna ay dhiiragalin ka haleyso.
Hadafkii inuu yahay mid macquul ah (Realistic) maxaa yeelay hadii aad ka dhigatid hadaf waxaan suuragal noqoneyn, shaki maleh in ay adagtahay in aad gaartid.
Ugu danbeyntii hadfku waa inuu yahay mid waqti ku xiran/waqtiyeysan(timely), hadafku waa inuusan waqti iska furan laheyn, oo uu xadidanyahay, taasi waxay kugu kaalmeyn in aad iska ilaalisid dibdhigasho howl (procrastination) iyo in aad rajeyso in wax kasta in ay sax ku dhamaadaan( perfectionism).
Isku soo wada duuboo waxay qodobaddaasi kore lagu soo koobaa SMART, taas oo qofka ama shirkadba ku caawisa inuu si sax ah u dajisto hadafkiisa.
Hadaba, wax kasta waxay leeyihin caqabaddo ka xaniba horusocodka sidaa darted waxaan si kooba uga hadli doonaa waa sida aad u maareyn laheed hadii culaysyo ay kusoo wajahaane, kuwaasoo hakinaya fulinta hadafyadda, culaysyadaas nuucay rabaanba ha noqdaane waxaa lagu xalin karaa sida tan: Isbedel ku samee hadafka culayska ku yimid, kadibna dib isku waafaji culayska iyo hadafka, markastana hadafyadaadu ha ahaadaan kuwo la qabsan kara isbadalada ama u jilcsan in wax laga badalo, aydoon asalkii laga tageyn.
Qormadeenan 2-aad waxaan si kooban uga hadalnay: Waa maxay Qoraal Nololeedka Qofeed? Muhiimadda ay u leedahay qofka? Sifadda laga rabo qoraalka, iyo sida loo qorto Qoraal nololeedka, waxaa kaloo sii xigay hanaanka qoridda hadfka. isku daygaan aan sameeyey ee ku aadan sida aan ugu faa’iideyn lahaa qofkasta oo jecel inuu Is-hormariyo, ayaan qoraaladeena xiga anagoo kusii dhameystiri doona qeybaha kale ee mawduucaan ayaan manta intaas ku ekeynaynaa. Wixii sixid qaladaad, tusaaleyn ama talo ahba adoo mahadsan fadlan iigu soo gudbi cinwaanadeydan hoose.
Qaybtii hore ka akhri: http://somalitalk.com/tag/cabdikamaal/
Waxaan halkan uga mahadcelinayaa inta igu dhiira galisay iyo inta igu kaalmeysay diyaarintiisa iyo maamulka website-kaan, iyo asaxaabtayda kala ah Cabdulqaadir Maxamed “Cabdiboqor”, C/fitaax Muxumed Salad (Diyeeshe), Axmad Garaad, Maxamed Amiin, iyo Axmed maxamed Adam, Ing. Jaabir, Maxamed ibraahim(Jananka).
W/D: Cabdikamaal Maxammed Sheekh C/laahi
Master of Management-candidate
Faafin: SomaliTalk.com // Halkudheg: Cabdikamaal
11 Jawaabood " Habka Ugu Sahlan ee Is-Hormarinta Qofeed.. Q.2aad | Cabdikamaal "
Saacid cali cadaan, Italy says:
Sunday, July 25, 2010 at 6:36 am
Ustaadka aad ayuu u mahadsanayahay, qoraalkaan aadka u qiimaha badan, Sidoo kale waxaan aad ugu mahadceliynayaa Somalitalk.com, sida ay noogu faa’iideyso, ayadda iyo qoraayahanadeeda allaha noodaayo.
kowsar omar cadaani says:
Sunday, July 25, 2010 at 5:12 am
asc waxaan halkaan ka salamay cabdikamal mohamed sheekh abdulahi cabdikamala runti brother aad aayn u bogadinayaah qoraalkaan waa mid muhiim inoo ah dhamanteen iyo intii hiigsaneyso mustaqbal dhaw amaba mid dheer ee hadafkiisu yahay in uu garao natiijada u leyahay runti hadalkaan manta ana ka aqriyay waa hadal aad hada ka hor ii shegtay oo aan xasuusto marwalbo oo aan rabo in aan xaqiijiyo ahdaafteyda waan xasuustah waxa uuna ahaa hadal dhaxal gal ah mana hilmami doono intan nolahay waana ku mahadsantahdsantahay sida aad ugu dadaashay in aad noogu so gudbisho fikirkaaga ….!
Saturday, July 24, 2010 at 11:09 am
ASALAAMU CALAYKUM..waan sugaynee ma isasoo tubay!!! maqaalkan qaybtiisan aadbaan udanaynayey,markasta oo aan webkan furana waan qooraansanayey hadba halka aan ufilayo in lagu soo dhajindoono.. mahadsanid kun iyo kow jeer c.kamaal..inkasta oo uu c.kamaal sidan udhigan haddana xisaabta haku darsado dadku waxa uu soo qoray in aanay duruufuhu usaamixi karayn in uu sidaa umaareeyo.haddana muhiimadda aan anigu kala baxay ayaa ah jadwalku haga samayso si aad uxaqiijiso doonitaankaaga..mahadsanid markale sxb,c.kamaal.. arday ahaan wuuu i anfacayaa,….
Shacni UK says:
Friday, July 23, 2010 at 11:49 pm
Waa qoraal aad no anfacay, hadaanhay ardayda wax barata….
cabdiqani maxmed bayow says:
Friday, July 23, 2010 at 11:04 am
sxb waad mahad sanaty ee si daasi iyo si ka sii fiican walaahi waxa badan ayaan ka fahamay qoraalka aad soo qortay hanbayo ayaan ku leeyahay cabdi kamaal sxb sii wad ilaah ha kugu garab galo guullll
Yaasmiin, USA says:
Wednesday, July 21, 2010 at 11:35 pm
Waxaan u baranay beryahaan qoraalo siyaasadeed iyo kuwo jeceyl, Waa uu ku mahadsanyahay walaalkeen abdikamal qoraalkiisaan aadka wax iiga badalay. waxaan ka rajeynayaa inuu qoraaldda danbe kusoo qaato hooyadda iyo maamulka guriga iyo is hormarinteedda, ayadoo maamulaysa gurigeeda.
Wednesday, July 21, 2010 at 7:47 am
Waad ku mahadsantahay qoraalkaan aadka uqiimaha badan
Tuesday, July 20, 2010 at 1:51 am
Aad ayaad u mahadsantahay ustaad cabdi kamaal
qoraalkaada qiimaha badan leh
Waxaan ku rajeeynaa hoowsha kheeyrka ha inaad sii wado
Bashiir Mcalin ''AbuXudayfah'' says:
Saturday, July 17, 2010 at 7:47 pm
Dhab ahaantii webkaan http://www.somalitalk.com aad iyo aad ayaan ugu diirsaday maqaaladiisa xikmadaysan iyo Qorayaasha Xirfada wacan leh waxaana aad ugu mahad naqaa walaaka maqaalkaan soo qoray mahadsanid ayaan leyahay waxaan Ummada Soomaaliyeed kula dardaarmaa in ay watiga iyo kala nidaamiskiisa ku dadaalaan waa muhiim waxaan idiin soo Hadyaynaa 2 xikmadood uu kala ah
”Qiimaha Waqtigaaga waa Qiimaha Nolashaada”
”Wax barta aan Barwaaqo Gaarnee”
Friday, July 16, 2010 at 10:57 pm
Kheyr allaha kaa siiyo saxiib, Qoraalkaan aad iyo ad ayuu iicajabiyey waxaan kugula dardaarmayaa in aad buuk ka dhigtid alle haduu idmo mustaqbalka.
Friday, July 16, 2010 at 10:55 pm
Aad iyo aad baad u mahadsanathay